ब्यापक घट्दै मोबाइल कल शुल्क, अब १० पैसाभन्दा बढी लिन नपाउने-[ यस्तो छ नयाँ निर्देशिका ! पुरा हेर्नुहोस ] -
ब्यापक घट्दै मोबाइल कल शुल्क, अब १० पैसाभन्दा बढी लिन नपाउने-[ यस्तो छ नयाँ निर्देशिका ! पुरा हेर्नुहोस ]
काठमाडौं। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एक नेटवर्कबाट अर्को नेटवर्कमा कल गर्दा लाग्ने शुल्क घ’टा’उनुपर्ने गरी निर्देशिका जारी गरेपछि चैतबाट शुल्क घट्ने भएको छ । गत भदौमा ल्याइएको निर्देशिकालाई हालै संशोधन गर्दै प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई तीन महिनाभित्र नयाँ व्यापारिक योजना बनाउन नि’र्दे’शन दिएको हो ।
१२ दिनमै को’रोनालाई जितेका सांसद यादवले यसरि भगाए को’रोना !